Vaovao - Ahoana ny fitazonana ny firavaka?
Ny namana vehivavy rehetra dia manana firavaka be dia be.Rehefa avy nividy firavaka, ny fanalahidin'ny hankafizana ny fifalian'ny firavaka mandritra ny fotoana maharitra dia ny fahalalana ny fomba fikojakojana sy fiarovana azy.Ny firavaka, toy ny zavatra ilaina andavanandro, dia ho voaloton'ny menaka, vovoka ary loto hafa mandritra ny fanaovana azy, ary mety ho simba rehefa mandeha ny fotoana.Noho izany antony izany dia mila fanadiovana, fikojakojana ary fikojakojana matetika isika mandritra ny dingan'ny fitafy.
Ny fikojakojana tsy mety ny firavaka volamena sy volafotsy sarobidy dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny vidiny azo ampiharina. Mila mitandrina isika rehetra amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
1. Tsy azo atao ny manao firavaka amin'ny fanatanjahan-tena.Rehefa manao fanatanjahan-tena ianao dia tsy maintsy tsemboka.Ny hatsembohana dia asidra ary mety hanimba ny firavaka volamena sy volafotsy.Hisy fiantraikany amin'ny lokony sy ny famirapiratany ny fiposahan'ny hatsembohana maharitra.
2. Aza avela hifandray amin'ny zavatra simika manimba ny firavaka volamena sy volafotsy.Mino aho fa fantatry ny rehetra izany, satria rehefa mividy firavaka volamena dia hampitandrina anao ny mpandroso sakafo tompon'andraikitra iray: ny firavaka volamena sy volafotsy dia tsy tokony hifandray amin'ny zavatra simika manimba, toy ny bleach sy banana.Rano, asidra solifara, sns.
3. Ny firavaka volamena sy volafotsy dia tsy azo fehezina na tsindriana.Ny firavaka volamena sy volafotsy dia tena malefaka.Tsy mahatanty fifandonana amin'ny fanerena be loatra izy ireo.Tsy hahomby ny fanerena mafy.Izany dia hahatonga azy ireo hiova endrika, ary avy eo dia hosorina mivantana izy ireo, na dia manana sanda sisa aza, fa ny pratika dia lasa.
4. Esory azafady ny firavaka volamena sy volafotsy rehefa mandro na manao raharaha ao an-trano.Rehefa manao raharaha ao an-trano na mandro ianao, dia tsy maintsy hifandray amin’ny fitaovana fanadiovana sasany, ary hanimba ny firavaka volamena sy volafotsy ny ankamaroan’ireo fitaovana fanadiovana ireo.Ny famirapiratana sy ny bika aman'endriny dia ho simba, koa aoka ho azo antoka ny hanala azy rehefa mandro na manao raharaha ao an-trano.
5. Tsy azo apetraka amin'ny sitrapony ny firavaka volamena sy volafotsy.Raha firavaka volamena sy volafotsy no apetraka amin’ny sitrapo, dia mora ny miteraka “accident” nefa tsy fantatrao, toy ny fiatraikany, ny fijanonana amin’ny avo, ny potipotin’ny zavatra mavesatra, sns.
6. Diovina tsy tapaka ny firavaka volamena sy volafotsy.Mampiasà fitaovana fanadiovana manokana.Rehefa manao firavaka volamena sy volafotsy matetika dia tsy azo ihodivirana fa tena maloto.Amin'izao fotoana izao dia aza mampiasa fitaovana fanadiovana amin'ny sitrapo, indrindra fa ny fanadiovana karazana scrub, raha tsy misy fitaovana fanadiovana manokana., Azonao atao ny mampiasa gel fandroana zazakely fa tsy.Satria ny gel fandroana zaza dia malefaka amin'ny natiora.
7. Ny firavaka volamena sy volafotsy dia tokony hotehirizina ao anaty boaty manokana.Tsy afaka mampifangaro firavaka volamena sy volafotsy ianao ao anaty boaty fitahirizana manokana.Mino aho fa manana baoritra firavaka ianareo rehetra, satria hisy baoritra rehefa mividy ireny entana sarobidy ireny, fa aza afangaro mba hahamora kokoa, fa izany no mahatonga azy ireo hifanakaiky sy hifanimba ary hisy fiantraikany amin’ny famirapiratana sy ny endriny.
Rehefa mikarakara ny firavakao ianao dia afaka manondro ireto manaraka ireto:
1. Famafana tsy tapaka amin'ny lamba malefaka na borosy malefaka mba hanadiovana
2. Aza mifandray amin'ny akora maranitra sy simika
3. Fadio ny mitafy amin'ny tontolo mando, toy ny efitra fandroana, dobo filomanosana, sns.
4. Aza manao izany rehefa manao raharaha ao an-trano sy manao fanatanjahan-tena mafy
© Copyright 20102021 : Zo rehetra voatokana.	Vokatra asongadina Sitemap Volamena Pendant Disc Kavina Rainbow Firavaka varahina nopetahana volamena Rojo voasokitra Huggie Hoop Kavina Sterling Huggie Hoop Ny vokatra rehetra